Zimbabwe: New Twist in Grace Mugabe's Diamond, Property Row - allAfrica.com
A judge has ordered President Mugabe's wife to return seized houses which belong to a Lebanese national after a U.S.$1.35 million diamond ring deal went wrong. The actions of the first lady have been widely condemned by religious leaders.
New Zimbabwe, 11 January 2017
THE botched $1,4 million diamond ring deal saga involving Grace Mugabe and a Lebanese dealer, Jamal Ahmed, has taken a new twist with the controversial First lady sensationally… Read more »
Zimbabwean First Lady Grace Mugabe has denied grabbing five properties belonging to a Lebanese tycoon whom she accuses of duping her in a botched $1.35 million diamond ring deal. Read more »
Zimbabwe: Catholic Priest Condemns Grace Mugabe's U.S.$1 Million Diamond Ring
New Zimbabwe, 27 December 2016
A Roman Catholic priest has castigated the First Lady Grace Mugabe for acquiring a $1, 3 million diamond ring at a time when Zimbabweans were going hungry. Read more »
Zimbabwe: Priest Slams 'Loveless' Grace Mugabe Over Diamond Ring
News24Wire, 28 December 2016
A Zimbabwean priest has reportedly labelled First Lady Grace Mugabe "loveless" for "acquiring" a $1.35m diamond ring "at a time when Zimbabweans were going hungry". Read more »
Zimbabwe: Judge Orders Grace Mugabe to Return Seized Diamond Ring
News24Wire, 22 December 2016
A Harare judge has ordered Zimbabwe's controversial First Lady Grace Mugabe to return three properties that she seized from a Lebanese businessman in a botched US$1.35m diamond… Read more »